कोरोना भाइरस बारे जनमानसमा उब्जिएका २० प्रश्नको उत्तर यसरी दिन्छन डा. कल्याण । – Butwal Sandesh
कोरोना भाइरस बारे जनमानसमा उब्जिएका २० प्रश्नको उत्तर यसरी दिन्छन डा. कल्याण ।
– Coronavirus सामान्य Flu जस्तै रुघा खोकी जस्तै virus हो तर अहिलेको virus बिरुद्ध हाम्रो शरीरले (ready-made) immune तयार पारी नसकेको हुँदा धेरै जसो बृद्धबृद्धा र दिर्घरोगिलाई यस बिरुद्ध लड्दै नयाँ immune को निर्माण गर्न सहज हुँदैन; उनीहरुको थकित र सिथिल शरीरले थाम्न सक्दैन।
– अहिले संसारभर, निकै धेरै मेहेनत गर्दा पनि ७० नाघेका १०० जनामा करिब ४ को र ८० नाघेका १०० जनामा ९ जना जतिको ज्यान गएको छ । यदि virus फैलन रोकथाम गर्ने प्रयास गरिएन र सबै ठाउँमा सर्न दिईयो भने (सबै बृद्धबृद्धा र दिर्घरोगिको मृत्यु नहुने भएपनि) १०० जनामा coronavirus लाग्यो भने करिब १०-२० जनासम्म मर्न सक्छन। युवामा १०० जनामा १-२ जनासम्म मृत्यु हुन सक्छ। देशभर एकै पटक सबै घरमा फैलन दिने हो भने नेपालको सबै घरमा जुठो बार्नु पर्ने हुन सक्छ।
– प्राय कुनै पनि virus मार्ने औषधि हुँदैन। Corona virus लाई मार्ने औषधि पनि छैन। तर virus ले शरीरमा पार्ने असर कम गर्ने, virus बिरुद्ध लड्न शरीरलाई सहयोग गर्ने, virus शरीरमा फैलन कम गर्ने औषधि उपचार गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा धेरैको ज्यान जोगिन्छ।
– Mask, Sanitizer, साबुन पानी, ६ फिट दुरी आदि virus एकजनाबाट अर्कोमा फैलने प्रक्रिया कम गर्ने एक उपाय हो। देशभर सबैले प्रत्येक पटक यसो गर्न सक्यो भने lockdown गर्नु पर्दैन।
– पर्याप्त PPE उपलब्ध र अन्य उपकरण/सुरक्षा पर्याप्त भयो भने कुनै पनि स्वास्थकर्मी hospital र clinic मा जान डराउदैनन् र उपचार गर्न जान छोड्नुहुन्न। अमेरिकामा (२ हप्ता अघिको data हेर्दा) ९०० जना स्वास्थकर्मीले ज्यान गुमाईसकेका छन्।
– Coronavirus को लक्षण युवामा त्यति सार्हो नहुने, (धेरैलाई) १-२ हप्तासम्म सामान्य रुघा खोकी कै जस्तो लक्षण देखिने र सन्चो हुने हुन्छ। कसैलाई कुनै लक्षण अनुभब नहुन सक्छ। युवाले virus परिवार र छरछिमेकका बृद्धबृद्धा र दिर्घरोगिमा सारिदीन सक्ने हुनाले हामी युवा मतलबी हुनु भएन।
– घर बाहिर (खुल्ला ठाउँमा) कम्तिमा ६ फिटको दुरी भयो भने mask लगाउनु पर्दैन। तर closed space, shopping center भित्र पर्छ। अर्को कुरा, कतिखेर को व्यक्ति आँफु नजिक आउँछ पत्तै नहुन सक्छ र हतारमा mask लगाउन नभ्याउन सकिन्छ। यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
– Coronavirus ले शरीरको सम्पूर्ण कोषमा आक्रमण गरेर कोषको अन्त्य गरेर ज्यान जाने होइन। त्यस virus ले केहि अंगमा जस्तै फोक्सोको कोषमा छिरेर आफ्नो संख्या बढाउने प्रक्रियामा केहि कोषहरु मर्दा, हाम्रो शरीरको भएभरको immune system ले attack गर्न खोज्दा virus मार्ने प्रक्रियामा आफ्नै शरीरका धेरै कोषहरुमा असर पुर्याउँदा मृत्यु हुने हो। (कुनै) युवाको हकमा प्रशस्त भएको immune कोषले उचित तबरले virus लाई मत्थर नपारेर uncontrolled immune reaction देखाउदा आफ्नै शरीरको फोक्सो damage गर्ने, blood clot को निर्माण हुने आदि हुन्छ र मृत्यु हुन्छ।
– संसारका सम्पूर्ण फलेको फुलेको प्राकृतिक कुरामा हाम्रो शरीरमा चाहिने केहि न केहि गुण हुन्छ। सबै खाने कुरामा antiviral, antibacterial, antioxidant तत्वहरु हुन्छन तर ति कुराले रोगको अन्त्य वा virus मार्ने काम गर्दैनन्। शरीरलाई हल्का सहयोग मात्र गर्छ। बेसार खानु नराम्रो होइन। १०० जना युवामा करिब ९८ जनाको यत्तिकै पनि ज्यान जोगिने भएपछि ति सबैले संक्रमण हुँदा waiwai चाउचाउ खाएका थिए भने waiwai चाउचाउले ९८% रोगीको coronavirus रोग निको पार्यो भन्न पनि सकिन्छ; जुन सत्य हुँदैन।
– Lockdown गर्नुको कारण केहि खाएर वा नखाएर मात्र corona को रोकथाम हुँदैन; एक अर्कामा फैलन नदिन सबैजना एकअर्काबाट पर बसौं भन्न खोजेको हो।
– एकपटक संक्रमित भएपछि शरीरमा virus फैलने प्रक्रिया करिब २ हप्ता चल्न सक्छ। त्यसपछिको केहि हप्तासम्म Virus को केहि अबषेश (genetic material) शरीरमा रहन सक्ने हुँदा कसैको ३-४ हप्तासम्म पनि rtPCR test मा positive देखिन सक्छ। यदि virus positive देखिएको २ हप्ता भो र तपाईं राम्रै हिंडडुल गर्नु भएको छ भने तपाईंले अब virus लाई जित्नु भो। ३ हप्तामा मा त १००% guarantee गर्न सकिन्छ।
– सम्भावना निकै कम छ। २१ दिन पछि सर्दैन भनेर १००% guarantee गर्न सकिन्छ।
– सानोमा जस्तो सुकै रोग लागे पनि तपाई अहिले दिनहु जसो खानु पर्ने कुनै पनि औषधि खानु परेको छैन; गएको ६ महिनामा कुनै पनि ठुला शल्यक्रिया भएको छैन भने तपाईं अरु सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जस्तै हुनु भयो।
– फोक्सो, मुटु, मृगौलाको रोगको लागि, diabetes को लागि नियमित जसो औषधि खानु हुन्छ र बेला बेलामा दमको समस्या भएर inhaler लिनु पर्ने हुन्छ भने तपाईं दिर्घरोगि हो भनेर बुझ्नुस। चुरोट पिउनु हुन्छ भने तपाईंलाई दिर्घरोगिलाई भन्दा ज्यादा असर गर्न सक्छ।
– मृत्यु भएको व्यक्तिको नाक र मुखबाट निस्किएको छिटाबाट र शरीरबाट निस्किएको अन्य तरल पदार्थबाट (बढीमा) १-२ हप्ता पछिसम्म Coronavirus सर्न सक्छ। मृत शरीर जांच गर्ने forensic medical professional को मृत्यु भएका घटना पनि छन्।
– मृतकको अनुहार (पूर्ण रुपमा) ढाकीदिने वा clear plastic को bubble जस्तो (helmet जस्तो) कुराले अगाडीबाट ढाकीदिने हो भने + सुरक्षित रुपले शरीरको कपडा नयाँ परिवर्तन गरिदिने हो + १-२ जना बाहेक अन्य टाढा बस्ने + नजिक गएकाहरु २ हप्तासम्म isolation मा बस्ने हो भने अरुमा virus सर्नबाट रोक्न सकिन्छ।
– Virus ले करिब ६-१२ महिनामा केहि रुप परिवर्तन गर्छ। सोहि strain को virus पछि पनि आयो भने शरीरले उत्तिखेरै अन्त्य गरिदिन्छ। अलि फरक खाले भो भने पनि शरीरमा फैलिएला (test मा positive देखिएला) तर शुरुमा दुख दिएको जत्ति असर गर्दैन र अन्य सामान्य virus को जस्तो सामान्य रुघा खोकी जत्ति मात्र हुन सक्छ।
– Coronavirus तरकारी, फलफूल र माछा-मासुमा bacteria जस्तो संख्या बढ्ने र फैलने हुँदैन तर ति कुरा handle गर्ने वा भर्खर आँफू भन्दा अघि छोएको व्यक्तिले त्यसमा coronavirus सारेको रहेछ भने तपाईंमा सर्न सक्छ। त्यसैले सतर्कता अपनाउनु पर्छ। ति बस्तुलाई अन्य surface area जस्तो सोच्नुपर्छ। बजारका सामान छोएपछि हात अनुहारमा नलाने, घर पस्नु अघि साबुन पानीले हात धुने, मिल्छ भने ति सामानहरु घरको कुनामा राख्ने र १-२ दिन पछि मात्र प्रयोग गर्ने गर्यो भने डराउनु पर्दैन। उत्तिखेरै प्रयोग गर्नु पर्ने तरकारी माछा मासुलाई एकपटक राम्रोसंग पखाल्नुस, हात राम्रोसंग धुनुस। तापक्रम निकै बढेको हुनाले पहिले जस्तो डर छैन। लामो दुरीबाट आउने सामानको surface मा virus सरेको भए आउँदा आउंदै मरेको हुन्छ केहि घण्टा वा दिनमा। Coronavirus कै कारण बजारका सामान किनेर प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन। मैले supermarket जाँदा mask लगाएर जान्छु, पहिले shopping cart को handle sanitize गर्छु, नकिन्ने सामान छोएर चलाएर बस्दिन, अरुले धेरै चलाउने समान paper towel ले grab गर्छु, निस्कने बित्तिकै दुवै हात alcohol based sanitizer ले सफा गर्छु र घर पस्ने बित्तिकै साबुन पानीले हात धुन्छु। पानीको मामलामा, पानीबाट फैलदैन तर बाहिरी bottle वा jar को surface बाट फैलन सक्छ।
– फरक strain भएको COVID-19 हुन सक्छन तर अहिलेसम्म देखिएको सबैखाले strain का coronavirus हरु एकै तरिकाले असर गर्ने खालका छन्। Theoretically, एकपटक virus पसेपछि संख्या बढ्ने क्रममा प्रत्येक व्यक्तिमा फरक फरक strain भएर निस्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
– नजिक हुँदैमा १००% सर्छ भन्ने हुँदैन; probability धेरै हुने मात्र हो। नाक र मुखबाट निस्किएको Virus भएको छिटा कस-कसको शरीरमा पर्यो, शरीरबाट (हात वा अन्य माध्यमले) virus नाक र मुख भित्र कस कसको छिर्यो, शरीरमा छिर्ने बित्तिकै immune system ले कसकसको तुरुन्तै मत्थर पारिदियो वा फैलिएर गयो भन्ने आधारमा positive र negative देखिन सक्छ।
– सकेसम्म शरीरको छाला देखिने भाग सबै सफा गर्नु पर्छ र कपडा पनि धुनु पर्छ। शरीरको अन्य भागमा भएको virus हातले नाक र मुखमा लान सक्ने हुनाले सबै भन्दा धेरै हात धुनु पर्ने हुन्छ।
– सबै देशमा dettol मा हुने ingredient र त्यसको concentration उही नहुन सक्छ। Hand sanitizer नभएको र हात धुन नमिल्ने अवस्थामा वा bleach वा अन्य product ले घरका सामानहरु सफा गर्न नपाएको अवस्थामा dettol प्रयोग गर्दा हुन्छ। Dettol ले अन्य रुघा खोकीको virus लाई मार्ने हुँदा covid-19 लाई पनि मार्ने खुबी हुन सक्छ भनेर Dettol को webiste मा लेखेको छ।
– यदि सबै corona positive मात्र isolation मा बसेको हो भने बसेको ठाउँबाट १४-२१ दिनसम्म बाहिर ननिस्किने। उचित आहार, ब्यायाम र रमाइलो काम कुरा हरु गर्ने गर्नुपर्छ।
– यदि test नगरी संकाको भरमा मात्र isolation मा राखेको हो भने अन्य positive भएको व्यक्तिबाट आँफुमा सर्न नदिन सबैबाट कम्तिमा ६ फिट पर हुनु पर्यो; अरुले छोएको ठाउं पूर्ण रुपमा sanitize नगरी आँफु जाने वा छुने गर्नु भएन; खाने-पकाउने ठाउं, बस्ने कोठा र सौचालय personal हुनु पर्यो अरुले share गर्ने खालको हुनु हुँदैन।
– सम्पूर्ण बृद्धबृद्धा, दिर्घरोगी, स्वास्थकर्मी र कम्तिमा ५०% अन्य सर्बसाधारणले vaccine नलगाउँदासम्म अहिलेको स्थिति नै रहने छ र सोहि अनुसार तयारी गर्नु पर्छ। अझै कम्तिमा ४ महिना सतर्क हुनु पर्छ।
– Virus ले फोक्सोमा असर पुर्याएपछि फोक्सो भित्र oxygen नपुग्ने र शरीरले oxygen नपाउने हुनाले शरीरका अन्य अंगले पनि काम गर्न छोड्ने स्थितिमा Ventilator को सहायताले oxygen delivery गर्ने काम गर्छ। अरु अंग पहिले देखि नै रोगि र थकित थिएनन् भने ventilator को सहयोगले ज्यान धेरैको जोगाउन सकिने हुन्छ। यसले संक्रमण घटाउँदैन फोक्सो भित्र oxygen deliver मात्र गर्छ।
– तुरुन्त isolation मा बस्नुस। यदि तपाईंलाई कुनै दिर्घरोग छैन, सास फेर्न गार्हो भएको छैन र सामान्य हिडडुल गर्न सक्नु भएको छ भने तपाईं आत्तिनु पर्दैन। नियमित खानेकुराहरु प्रसस्त खाने, पानी पिउने, rest र exercise को balance मिलाउने, रमाइलो activities हरु गरेर mind distract गर्ने आदि गर्नुस। जब सास फेर्न निकै गार्हो हुन्छ र केहि पाइला हिंड्दा पनि लड्छु जस्तो हुन्छ भने hospital जानु पर्छ र oxygen र अन्य औषधि उपचार लिनु पर्ने हुन सक्छ।
Coronavirus बारेको यी ५ video पनि हेर्नुहोला
#१; कसरी ज्यान लिन्छ र कसरी जोगिने:
Coronavirus ले कसरी ज्यान लिन्छ? Virus सर्न नदिन के गर्न सकिन्छ? Please Share [यो video मा like नगर्नुहोलाl तलको comment box मा . थोप्लो दिनुहोला]
Posted by Talk To Dr. Kalyan on Sunday, March 1, 2020
#२;बृद्धबृदालाई कसरी जोगाउने
Coronavirus बाट वृद्घवृध्दा र दिर्घरोगीलाई कसरी जोगाउने? [(भाग दुई)] COVID-19
Coronavirus बाट वृद्घवृध्दा र दिर्घरोगीलाई कसरी जोगाउने? [(भाग दुई)] Please Share. [तलको Comment Box मा . थोप्लो दिनुहोला l यो Video लाई LIKE नगर्नुहोलाl ]] Coronavirus बारेको भाग एक हेर्न यहाँ जानुहोला –> https://www.facebook.com/DoctorKalyan/videos/195863551728839/
Posted by Talk To Dr. Kalyan on Wednesday, March 18, 2020
#३; कस्तो breathing exercise गर्ने
Coronavirus हुँदा फोक्सोमा थप समस्या हुन नदिने Breathing Exercise !
Coronavirus हुँदा फोक्सोमा थप समस्या हुन नदिने Breathing Exercise ! Please Share ! [[[यो video मा like नगर्नुहोलाl तलको comment box मा . थोप्लो दिनुहोला l]]]
Posted by Talk To Dr. Kalyan on Saturday, April 18, 2020
#४; Immune boost गर्न के गर्ने
शरीरमा रोग लाग्न नदिन रोगसंग जुध्न Immune Power बढाउनके के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ? Please Share ! [[[यो video मा like नगर्नुहोला l तलको comment box मा . थोप्लो दिनुहोला]]]
Posted by Talk To Dr. Kalyan on Friday, April 3, 2020
#५; rt PCR test कस्तो बेलामा गर्दा बेस हुन्छ? कुन बेला positive र कुन बेलामा negative देखाउछ?